October 6, 2020 – ျမန္မာသတင္းစံု
အပြင်မထွက်ရတာကြာပြီလို့ပြောတဲ့ မေမေစိတ်ကျေနပ်အောင်အမျိုးတ စ် သိုက်နဲ့ နေရာစုံလိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဖြူ ဖြူ ထွေးရဲ့ အခွီဗီဒီယို
အပြင်မထွက်ရတာကြာပြီလို့ပြောတဲ့ မေမေ စိတ်ကျေနပ်အောင် အမျိုးတစ်သိုက်နဲ့ နေရာစုံလိုက် ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ အခွီဗီဒီယို ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်ရအောင် ဗီဒီယိုလေးတွေ တင်ဆက်ပေးတတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ကတော့ ကျေးရွာလေးတစ်ရွာကနေ ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျောင်းလာတက်ရင်း မထင်မှတ်ပဲ နာမည် ကြီးလာခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးက ရိုးသားကြိုးစားပြီး ဟန်ဆောင်မှုမရှိတဲ့ ပုံစံလေးက ပရိသတ်တွေသာမက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပါ သဘောကျကြတာကြောင့် အ ခုဆိုရင် အွန်လိုင်းကြော်ငြာတွေကို လက်မလည်ရအောင် ရိုက်ကူးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာဗီဒီယိုလေးတွေလည်း ရိုက်ကူးနေသလို ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း ရယ်မောစရာ ဗီ ဒီ ယိုလေးတွေ ရိုက်ကူးပေးလေ့ရှိတဲ့ ဖြူဖြူထွေးက ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ သူမတို့ တစ်အိမ်သားလုံးနဲ့ ဗီဒီယိုလေး ရိုက်ကူးလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးက “အမေ — သမီး အမေ […]
Posted on October 6, 2020 Author admin	Comments Off on အပြင်မထွက်ရတာကြာပြီလို့ပြောတဲ့ မေမေစိတ်ကျေနပ်အောင်အမျိုးတ စ် သိုက်နဲ့ နေရာစုံလိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ဖြူ ဖြူ ထွေးရဲ့ အခွီဗီဒီယို
ယုန်လေးရဲ့ ကြော်ငြာမှာ သရုပ် ဆော င် ထားတဲ့ အပေါ် မိသားစုတွေကအား ပေးတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် L LIT SHAR
မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် L Lit Sharကတော့ လတ်တလော ယုန်လေးရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖိနပ် ကြော် ညာကြောင့် လူသိများလာသူတစ်ဦးပါ။ အခုတစ်ခေါက် ဖေ့ဘွက်မှာ ဂယက်ရိုက်သွားတဲ့ ယုန်လေးရဲ့ MI Star ဖိနပ်ကြော်ငြာမှာ ပါဝင် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အတွက် ဝေဖန်ခံရတာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး L Lit Shar ကတော့ Sunday Journal နဲ့အင်တာဗျူးမှာ အခုလိုပဲ သူ့အမြင်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဖိနပ်ကြော်ငြာကြောင့် ပရိသတ်တွေ သတိထားလာမိတဲ့အပေါ်မှာ L Lit Sharကတော့ “ကောင်း တယ်လို့တော့ ထင်တာပဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နည်းနည်းချင်း လူတွေသိလာတယ် အခုဆို လူတွေသ တိ ထားလာကြတယ် အရင်က Boost plus ကြော်ငြာနဲ့ သတိထားမိကြသလို အခုလည်း MI Star ကြော်ငြာနဲ့ […]
Posted on October 6, 2020 Author admin	Comments Off on ယုန်လေးရဲ့ ကြော်ငြာမှာ သရုပ် ဆော င် ထားတဲ့ အပေါ် မိသားစုတွေကအား ပေးတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် L LIT SHAR
COVIDကာလမှာ ချစ်ခင်ရတဲ့ ပရိသ တ် တွေကို အားမလျော့ကြဖို့ အားပေး စကား​​ဆိုလိုက်တဲ့ မင်းသားချောလေး မြင့်မြတ်
မင်းသားချောလေးမြင့်မြတ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်ထားနိုင် ခဲ့ ပြီး အောင်မြင်ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင် ဇာ တ်ကားကြီးတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အခိုင်အမာ ရ ယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်ကတော့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းကို အကောင်းဆုံး သ ရုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေပြီး ဇာတ်ကားတွေများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်ကတော့ အကယ်ဒမီဆုကိုလည်း သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ် ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်သဘောထားဖြူစင်ပြီး လူတိုင်းကို အပြုံးလေးတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံ တတ် တဲ့ မြင့်မြတ်ကတော့ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ ကတော့ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ မိသားစ​ုလေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မွငျ့မွတျကတော့ ယခုမှာ Covidကာလမှာ ပရိသတျတှကေို အားမလြော့ကွဖို့ အားပေးစကား ပွော လိုကျပါတယျ။ […]
Posted on October 6, 2020 Author admin	Comments Off on COVIDကာလမှာ ချစ်ခင်ရတဲ့ ပရိသ တ် တွေကို အားမလျော့ကြဖို့ အားပေး စကား​​ဆိုလိုက်တဲ့ မင်းသားချောလေး မြင့်မြတ်
Posted on October 6, 2020 Author admin	Comments Off on ငယ်ငယ်တုန်းကပိုက်ဆံရှာခဲ့တာသူမအတွက် ခုပိုက်ဆံရှာနေတာသာ သနာ တော်နဲ့ မရှိဆင်းရဲသားတွေကိုလှူဖို့ အတွက်ပါဆိုတဲ့ ပိုပို
ျဖည္းျဖည္းလုပ္ပါရွင္ (အစ/အဆံုး) Like and Shareေလး ျပဳလုပ္ၿပီး ဖတ္႐ွဴေပးၾကပါရွင့္
ထြန္းခင္သည္ငယ္ငယ္ကတည္း ကဆံပင္ကိုစြဲလန္းစိတ္ရွိသူတေယာက္ျဖစ္သည္. ဘယ္ေလာက္ေတာင္စြဲလန္းလည္းဆိုရင္ အိမ္နီးနားမွာရွိတဲ့ ဆံပင္ရွည္ မိန္းကေလးေတြ ေခါင္းေလွ်ာ္ေရခ်ိဳးေနတာ ေတြ႕ရင္သူ႔မွာ ဆံပင္ရွည္ေတြကို ခိုးခိုးၾကည့္ၿပီး စိတ္မွန္းျဖင့္ ဂြင္းထုရတာကို ႏွစ္သက္ေနမိကာ ၾကာလာေတာ့အားမရေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနေတာ့သည္. ထိုအခါအိမ္နီးနားမွာရွိတဲ့ ဆံပင္ရွည္ မိန္းကေလးေတြ အိမ္ကိုအလည္သြားပီး သူတို႔ဆံပင္အကြၽက္ေတြကို သူတို႔မသိေအာင္လိုက္ရွာယူၿပီး အိမ္ေရာက္ရင္ဆံပင္ရွည္အကြၽတ္ေတြကို နမ္းပီးဂြင္းထု ရတာပိုႀကိဳက္လာတယ္. အိမ္နီးနားမွာရွိတဲ့ ဆံပင္ရွည္မိန္းကေလးကိုလည္း အၿမဲစားဖို႔ ေခ်ာင္းေနေတာ့ေလသည္. ဒါနဲ႔ထြန္းခင္က တက္စီ ကားေမာင္းတာေလ မိဘေတြ မရွိၾကေတာ့ဘူး. တစ္ကိုယ္တည္း လူပ်ိဳႀကီးလည္းျဖစ္သည္. ထြန္းခင္ကားကို ဆံပင္အရွည္ႀကီးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးေတြ ငွားစီးတဲ့ေန႔မ်ားဆိုရင္ ထြန္းခင္စိတ္႐ိုင္းေတြဝင္လာၿပီး တေနရာရာ ကိုေခၚသြာၿပီး ဆံပင္အရွည္ႀကီးကို စိတ္ထဲရွိတာ လုပ္ပစ္လိုက္ခ်င္ေတာ့တယ္. ဒါေပမဲ့ ခက္တာက ထြန္းခင္မွာေနရာမရွိဘူးေလ. အဲ့ေတာ့ ထြန္းခင္ဘဝက ဆံပင္ရွည္အကြၽတ္ေတြ ရွာလိုက္ဂြင္းထုလိုက္နဲ႔ပဲ စိတ္ေျဖေနရေတာ့သည္. ဒီလိုနဲ႔ တေန႔ၾကေတာ့ […]
Posted on October 6, 2020 Author admin	Comments Off on ျဖည္းျဖည္းလုပ္ပါရွင္ (အစ/အဆံုး) Like and Shareေလး ျပဳလုပ္ၿပီး ဖတ္႐ွဴေပးၾကပါရွင့္
ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့အတူ ဘန်ကောက်မှာ နေထိုင်ရင်း သူမတို့ရဲ့အိမ်ကို လှလှ လေးဖြစ်အောင် လိုတာတွေဝယ်ပြီး အလှဆင်နေတဲ့အိမ့်ချစ်
အဆိုတော်မလေး အိမ့်ချစ်ကတော့ ထူးခြားတဲ့အသံပါဝါနဲ့ နားဆင်သူပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကို လှုပ် ခတ်သွားလောက်အောင် ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အိမ့်ချစ်က ဝါရင့်အဆိုတော် ချစ် ကော င်းရဲ့သမီးလေးလည်းဖြစ်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ခြေရာကို အမှီလိုက်နိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေနဲ့ အောင်မြင်စွာရပ်တည်နေပြီဖြစ်တဲ့ အိမ့်ချစ်က တေးသီချင်းကော င်း တွေကိုလည်း ဆက်လက်ဖန်တီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မကြာသေးခင်ကလည်း အိမ့်ချစ်က “ဘဝအဆက်ဆက်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် မျှဝေပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း အိမ့်ချစ်က ယခုလမှာထွက်ရှိမယ့် “အချစ်ဦး” သီချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလုပ်တွေကြိုးစားနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။အိမ်ထောင်ရှင်မလေး ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အိမ့်ချစ်ကတော့ ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့အတူ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်မြို့မှာ ခဏသွား ရော က်နေထိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း […]
Posted on October 6, 2020 Author admin	Comments Off on ချစ်ခင်ပွန်းနဲ့အတူ ဘန်ကောက်မှာ နေထိုင်ရင်း သူမတို့ရဲ့အိမ်ကို လှလှ လေးဖြစ်အောင် လိုတာတွေဝယ်ပြီး အလှဆင်နေတဲ့အိမ့်ချစ်